Edemede Martha Jameson na Martech Zone |
Edemede site na Mata Jameson
Martha Jameson bụ onye ndezi ọdịnaya na onye nyochagharị maka Ochichi na ỌmụmụBrits. Tupu ịchọta mmasị ya maka ide ihe, Martha rụrụ ọrụ dị ka onye mmebe weebụ na njikwa. Ihe kachasị mkpa ya na-eji ahụmịhe ya, mkpali ya na ihe ọmụma ya iji nyere ndị na-agụ ya na blọọgụ aka Ederede.
Tuesday, April 2, 2019 Tuesday, April 2, 2019 Mata Jameson
Y’oburu n’in’eme udiri ahia nke udi o bula, mgbe ahu ị n’eji usoro. O nwere ike ọ gaghị abụ usoro gọọmentị, atụmatụ, ma ọ bụ atụmatụ dị irè, mana ọ bụ atụmatụ. Chee echiche banyere oge, akụ, na mbọ niile na-aga ịmepụta ọdịnaya dị mma. Ọ bụghị ihe dị ọnụ ala, yabụ, ọ dị mkpa ka ị duzie ọdịnaya ahụ bara uru site na iji usoro kwesịrị ekwesị. Ndị a bụ ụzọ ise iji bulie egwuregwu azụmaahịa gị. Nwee Smart na ọdịnaya Ọdịnaya Gị